Abavelisi beentambo - abaThengi baseTshayina kunye neFektri
Indawo yokupheka yokulinda yokupheka intamo yenkosi ii-CU504S059000T4
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU504S059000T4 ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili enza izinto ezifanayo, iinkosi zentamo, iindwendwe zokungenisa izihambi, iyunifomu yoyilo Fabric 60/40 poly / cotton cotton GSM.143g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa ye ...
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo u-U502S0700A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U502S0700A Ubungakanani SIZE Amagama aphambili okokulinda izinto zokupheka, iinkosi zentamo Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...
Indawo yokupheka yokulinda yokupheka intamo yenkosi eyi-CU504S161000T4
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CU504S161000T4 ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili afanayo, iimpahla zentamo, iinkosi zokungenisa iindwendwe, iyunifomu yoyilo Fabric 60/40 poly / cotton cotton GSM.143g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yokuphakama ...
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo U502S1100A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U502S1100A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili abaphengululi, izithsaba zentamo Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, 2 life service as 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo U501S0100A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U501S0100A Ubungakanani BOKU-SENZA Amagama aphambili abapheki, izixhobo zentamo Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo u-U503S0100A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U503S0100A Ubungakanani BOKU-SENZA Amagama aphambili abapheki, izixhobo zentamo Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo U501S0200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U501S0200A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili abapheki, izixhobo zentamo Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...
Indawo yokutyela ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo U503S0200A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U503S0200A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili okokulinda izinto zokupheka, iintloko zenkosi Intloko 65/35 ipateni / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo U501S0400A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U501S0400A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili abapheki, izixhobo zentamo Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...